Mudanayaal Warshadda Dhar - Shiinaha marwo Manufacturers-saareyaasha, shirkado cusub
Waxaan ku taageernaa macaamiisheenna badeecado tayo wanaagsan leh iyo adeeg bixiye heer sare ah. Noqoshada soo saaraha takhasuska leh ee qeybtaan, waxaan gaarnay kulan taajirnimo wax ku ool ah soo saarista iyo maaraynta haweenka Maryo,,,, Waxaan ku sii wadaynaa cayrsiga xaalada WIN-WIN macaamiisheena. Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisha ka socota dhammaan bey'adda kor ku soo socota booqasho iyo sameynta xiriir dheer oo waara. Iyada oo tikniyoolajiyad casri ah iyo tas-hiilaad, gacan qabasho tayo sare leh oo adag, qiime macquul ah, taageero aan caadi aheyn iyo iskaashi dhow oo lala yeelanayo macaamiisha, waxaan u heellannahay bixinta qiimaha ugu habboon ee macaamiisheenna loogu talagalay Mudanayaasha Dharka, Waxaan aaminsanahay tayada iyo qanacsanaanta macaamilka ee ay gaareen koox shaqsiyaadka aadka u dadaala. Kooxda shirkadeena oo adeegsanaysa tikniyoolajiyad aad u hooseeya waxay soo bandhigaan alaab tayo leh oo aan fiicnayn oo si heer sare ah loo qadariyo loona qiimeeyo macaamiisheenna adduunka.
Qaabkani waa mid fudud oo xarrago leh. Naqshadeyntaani waxay ku habboon tahay dumarka. Astaamaha wax soo saar waxay ka kooban yihiin buuxinta gaarka ah (DuPont Sorona)
Qiyaasta dhumucdiisuna: dhumuc-khafiif ah, dhumuc caadi ah
Elastic index: elastic micro elastic super-laastik ah
Ku habboon xilliyada: Guga, xagaaga, deyrta iyo jiilaalka
Jaakada loo yaqaan 'Dupont Padded Jacket for Ladies'
Qaabkani waa mid fudud oo xarrago leh. Naqshadeyntaani waxay ku habboon tahay dumarka. Astaamaha wax soo saarku waxay ka kooban yihiin buuxinta gaarka ah (DuPont Sonora), Way ka diirran tahay kana fudud tahay jaakadda buuxinta caadiga ah.
Jaakad Nin Iyo Gabadh Duudduubtay
Qaabkani waa mid diiran oo qurux badan. Naqshaddani waxay ku habboon tahay ragga iyo dumarka Naqshadeynta ayaa ah mid diirran oo dhogor been abuur ah oo badan. Waxaa loo dhoofiyaa dalal badan oo adduunka ah. Suuqgan ugu weyn waa Yurub iyo waqooyiga Yurub.
Corduroy Vest ee Mudanayaal
Qaabkani waa muunad iyo xarrago .Waa iska daaya dahaadhka lambarada, oo ka diiran uguna casriga ah.
Dharka Kala Duwan ee Dharka Kala Duwan ee Gabdhaha
Qaabkani waa muunad iyo xarrago .Jalashadaani waa labada nooc ee tolida dharka .Waa jaakad suufan oo aad moodo.
Jaakada Dharka Dharka Kala Duwan Ee Mudanayaal
Qaabkani waa labada nooc ee tolida dharka .Waa mid aad u raaxo badan; jilicsan; iftiin. Midabka dhogorta iyo dharka caaggu waa isku mid.
Jaakada Dibadda ee Dumarka oo leh Hood
Qaabkani waa mid fudud oo xarrago leh. Naqshaddani waxay ku habboon tahay ragga iyo dumarka labadaba Naqshadeynta waa dabool laga saari karo oo ay leedahay jiinyeer naylon, waxayna leedahay jeebka laabta iyo jeebka hoose oo leh jiinyeer nayloon.